Ebe nchekwa Skype - Linux nwere ike
Skype bụ ngwa nzikọrịta ozi nkeonwe nke Microsoft nwe ma mepụta ya. Skype bụ otu n'ime ngwanrọ ama ama na ama ama maka ngwa nzikọrịta vidiyo, ọdịyo na ederede dị n'ofe ọtụtụ nyiwe. Maka ọtụtụ akụkụ, n'efu iji budata na iji, Skype bụ ngwa dị mma maka idobe na…
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux, Skype
Categories Ubuntu Tags Skype, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
Sunday, October 31, 2021 Sunday, October 10, 2021 by Jọshụa James
Categories Fedora Tags Fedora 34, Skype
Otu esi etinye Skype na Debian 11
Skype bụ ngwa ama ama ọkachamara n'inye nkata vidiyo na oku olu n'etiti kọmpụta, mbadamba na ngwaọrụ mkpanaka. Skype na-akwadokwa ụfọdụ ntụzịaka egwuregwu dị ka Xbox One, Xbox Series X/S consoles, smartwatches, na ọbụna Alexa. Akụkụ ọzọ nke Skype bụ onye ndu kemgbe ọtụtụ afọ…
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Skype
Saturday, October 30, 2021 Monday, August 16, 2021 by Jọshụa James
Skype bụ ngwa nzikọrịta ozi nkeonwe nke Microsoft nwe ma mepụta ya. Skype bụ otu n'ime ngwanrọ ama ama na ama ama maka ngwa nzikọrịta vidiyo, ọdịyo na ederede dị n'ofe ọtụtụ nyiwe. Maka ọtụtụ akụkụ, n'efu iji budata na iji, Skype bụ ezigbo ngwaọrụ maka…
Categories Nkume linux Tags Nkume Linux 8, Skype